Cabdiraxmaan Xoosh oo Sheegay in Guddoomiye Jawaari Is casilay ,Mooshinkiina la laalay | SAHAN ONLINE
Cabdiraxmaan Xoosh oo Sheegay in Guddoomiye Jawaari Is casilay ,Mooshinkiina la laalay
MUQDISHO – Wasiirka Dastuurka Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa shaaca ka qaaday in Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu is casilay isla markaana mooshinkii ka yaalay la laalay.
Cabdiraxmaan Xooshi ayaa bartiisa Twitterka ku shaaciyay in Guddoomiye Jawaari oo kamid ahaa xubnaha ay sida aadka ah siyaasada ugu loolameen isaga iyo Jawaari marka loo eego Barnaamijka Dastuurka.
..” Waa Rasmi Guddoomiye Jawaari waa is casilay, Mooshinkii waa la laalay”ayuu yiri Mr Xoosh qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Xildhibaan Cabdirashood Faahir Gaboobe ayaa sheegay in Guddoomiye Kuxigeenka 1aad Cabdiweli Muudey oo soo gaaray xarunta golaha shacabka uu ku wargeliyay in Jawaari is casilay isla markaana maalinta arbacada ah uu kulanka guud kaga dhawaaqi doono.
Xildhibaan C/rashiid Dahir Gaboobe ayaa sheegay in in Guddoomiye kuxigeenka 1aad C/wali Muudey oo soo gaaray xarunta Golaha Shacabka uu sheegay in Jawaari is casilay.
Xaaladii siyaasadeed ee jirtay ayaa xiligan u muuqata mid soo afjarantay iyadoona la is weydiinayo halka ay ku dambeyb doonto kala aragti duwanaantii jirtay ee Xildhibaanada labada dhinac ee golaha shacabka.